Hadaadan Rabin Aragtidayda, Ma Ahayd Inaadan Weydiinin! | Martech Zone
Hadaadan Rabin Aragtidayda, Ma Ahayd Inaadan Weydiinin!
Talaado, Oktoobar 28, 2008 Douglas Karr
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waawayn ee ku saabsan waxa aan sameeyo ayaa ah inay ila xiriirto shirkado kale oo aan hore ula soo shaqeeyay ama aan u soo shaqeeyey. Maanta waxaan helay xoogaa war ah oo niyad jab leh, in kastoo.
Qiyaastii bil ka hor, waxaan qaatay dhowr saacadood buuxinta xog-ururin dhammaystiran oo la ii soo diray mid ka mid ah shirkadihii aan u soo shaqeeyey oo hadda ka shaqeyneysa is dhexgalka iyo iibinta. Waxaan qalbigayga ku shubay shirkadda markaan joogay oo aan weli jeclahay dadkooda iyo wax soo saarkooda iyo adeegyadooda illaa maantadan la joogo. Si kastaba ha noqotee, isla sababihii aan uga tagay shirkadda ayaa sii waday inay soo ifbaxaan markii aan ka shaqeynay inaan dib u iibino barxadda - iskuxirnaanta bararsan, astaamo la'aan, qiime sare, iwm.
Waxaan ku calaamadeeyay casuumaadda sahanka sanduuqa sanduuqa si aan uga jawaabo sahanka markii aan u huriyo waqtiga. Habeen dambe iyo subaxda dambe, waxaan qaatay saacad fiican ama laba saacadood oo aan uga jawaabayay sahanka. Iyada oo leh aag qoraal ah oo furan, waxaan ahaa mid toos ah oo ujeedka dhaliishayda. Ka dib oo dhan, iib ahaan ahaan, horumarinta wax soo saarkooda ayaa ku jiray my danta ugu fiican. Ma aanan jiidin wax feer ah oo waxaan aad ugu sii jeedaa xagga hore waxa aan ka dareemay arrimaha muhiimka ah inay ahaadaan. Waxaan sidoo kale keenay tayadii ka tagtay shirkadda - waxay lumiyeen shaqaale badan oo wanaagsan.
In kasta oo sahanku ahaa mid aan la magacaabin, waxaan ogaa inay jiraan aqoonsiyo raadraac ah oo ku saabsan hannaanka soo gudbinta iyo hadaladayda runta ah si fudud ayay shirkaddu u garan kartaa inay aniga tahay. Kama aanan walwalin wax saameyn ah, waxay iweydiiyeen ra'yigayga waxaanan doonayay inaan u bandhigo iyaga.
Iyada oo loo marayo canabka canabka maanta (waxaa jira had iyo jeer canab), Waxaan ogaaday in odhaahdayda ay dib ugula hadleen shirkadda iyada oo, marka la soo koobo, la iima soo dhaweyn inaan la shaqeeyo shirkadda si loo sii wado xiriir kasta.
Natiijada, sidaan qabo, waa aragti gaaban oo aan bislaan. Taasi cidina ilama soo xiriirin shaqsiyan waxay muujineysaa xirfad la’aan sidoo kale. Waad ku mahadsan tahay aniga ahaan, waxaa jira adeeg bixiyeyaal badan oo badan oo suuqa ka jira oo bixin kara waxa aan ugu baahanahay lacag aad u yar oo aad ufudud ugu dhexjirta. Waxaan rajeynayey in aan ka caawiyo shirkaddeydii hore in aan u soo gudbiyo faallooyin cusub oo daacad ah
Haddii aysan rabin ra'yigeyga, waxaan jeclaan lahaa inaysan waligood weydiisan. Way i badbaadin laheyd dhowr saacadood oo waqtigeyga ah qofna dareenkiisa ma dhaawici laheyn. Walwal ma qabo, in kastoo. Sida ay rabaan, waxba kama qaban doono xiriir kasta oo aan iyaga la yeesho.
Tags: gettinderboxhindisahamaaraynta soo-jeedintaraadinta jaangooyooyinka
Qaado 60 Second Blogging Challenge
Oktoobar 28, 2008 at 3:25 PM
Hal shay oo mudan in laga fekero halkan ayaa ah in warka aad maqashay uu yahay mid rasmi ah ama uu yahay uun xan. Xafiisyadu waa goobo cabsi leh oo lagu xantayo xan, waxaa macquul ah in dadka dib u eegista ku sameynaya soo gudbintaada ay iskala baxaan oo ay yiraahdaan waxyaabo aysan aheyn inay lahaadaan, qof ka agdhowna uu maqlay taas oo u qaatay siyaasad rasmi ah. Xantaas ka dib way qalloocday oo waxay ka bedeshay kiis fudud oo dhageysi ah oo wax aad uga sii xun.
Dabcan taasi waa mala awaal also Sidoo kale waa macquul inaad ka go'day shirkad kastoo su'aal ah oo aad ka hadlaysid.
Laakiin waxaan u maleynayaa in su'aasha aan isweydiinayo naftayda xilligan ay tahay - ma dan baan ka leeyahay? Haddii aad dareen xanuun ku qabtid shirkadan (taas oo u eg sida aad ugu dhajiso boostadaada), markaa miyaad runtii dooneysaa inaad sii wadato la shaqeynta iyaga mar kasta?
Oktoobar 28, 2008 at 6:40 PM
Waad ku mahadsan tahay jawaab celinta weyn, Christian. Xaqiiqdii ma aanan dhejin laheyn haddii aan shaki ka qabo ku saabsan xanta ama xaqiiqda. Runtii waa run.
Casharka loogu talagalay shirkad kasta ayaa ah, haddii aadan diyaar u ahayn inaad hesho jawaab celin aad u xun, ha u dirin sahan saadasha ah!
Oktoobar 28, 2008 at 8:48 PM
Muxuu yahay casharka aad baratay?
Oktoobar 28, 2008 at 9:25 PM
Ross, taasi waxay noqon kartaa faallooyinka ugu fiican abid. Waxaan u maleynayaa in waxa aan bartay ay tahay in shirkado badan ay kaliya ku yaboohayaan daacad u ahaanta doollarka ee aysan ahayn shaqaalahooda iyo macaamiishooda.
Anigu saamiyada kuma lihi shirkadda waxbana igama lihi, markaa ma ahan inaan shaqsiyan qaato tan. Si dhakhso leh ayaan uga gudbi doonaa oo waxaan heli doonaa shirkad rabta inay dhageysato.
Oktoobar 29, 2008 at 2:18 PM
Waxaan u maleynayaa in dhibaatada dhabta ah ay tahay in shirkaddu aysan fahmin qiimaha ay leedahay in xoogaa toos ah loo maro, jawaab celin adag. Siduu Doug yiri, haddii aadan xiiseyneyn inaad maqasho wanaagga iyo waxa xun, markaa ha weyddiin qof inay daacad kaa tahay. Haddii waxa aad raadineyso oo dhami ay wanaagsan yihiin, togan yihiin, diirran yihiin, iyo aragtidooda khaldan. Kadib gacanta ku xusho macaamiisha / macaamiisha aad rabto jawaab celinta, u wac iyaga oo weydii "Maxaad naga jeceshahay annaga?" Hal su'aal, taasi waa taas, maxaa yeelay dhab ahaantii taasi waa wax waliba waxay u egtahay inaad runtii xiisaynayso inaad maqasho si kasta.
Iska ilow xaqiiqda ah inaad yeelan karto macmiil wax yar ka og adeegga aad isku dayeyso inaad iibiso iyo waxa ay ka dhigan tahay in dhab ahaantii la isticmaalo awoodeeda buuxda. Macaamilka aad iska indhatireyso wuxuu noqon karaa midka caqliga u leh inuu ogaado waxa su'aalaha ay tahay inay weydiiyaan dhammaan macaamiisha mana ahan sababta oo ah boqolkiiba 95% ma yaqaanaan wax aan ka aheyn waxa aad ugu sheegto adeeggaaga.
Hadaadan rabin inaad hagaajiso ama hagaajiso waxaad heshay oo aad wanaajiso, waqtiga ha naga lumin. Waxaa jira adeegyo kale oo badan oo sidaada oo kale ah oo aan "daanyeer" ku wareejin karno.
Oktoobar 29, 2008 at 3:22 PM
Si kasta oo ay u xun tahay jawaab celinta shirkaddu waa inay u qaadataa fursad horumarineed. Waxaad siisay wixii ay codsadeen waa inay ku farxaan inay helaan.
Haddii ay dareemaan inay tahay wax aan qiil lahayn, iska dhegayso xumaha oo ka shaqee wanaagga.
Isku soo wada duuboo waa dabeecad xumo aad u liidata inaad weydiisato ra'yi aan lagaranayn kadibna aad adiga ku diiddo.
Maxaan uga fogeynayaa qof gadaya alaabteyda?
Oktoobar 29, 2008 at 4:22 PM
Waxaan u maleynayaa in tani ay keeneyso arrin ka weyn. Shirkaduhu waxay u baahan yihiin inay ka taxaddaraan waxa ay ka sheegayaan dadka aad ugu firfircoon warbaahinta bulshada (sida naftaada oo kale). Waxay u baahan yihiin inay ula dhaqmaan dadka wax qora ee wax qora sida ay ula dhaqmi lahaayeen suxufiga. Haddii ay weydiisanayaan ra'yigaaga, waxay u baahan yihiin inay u adeegsadaan dhaliil wax ku ool ah ama ay iska indhatiraan. Waxa ugu xun ee ay sameyn lahaayeen ayaa ah inay u ogolaadaan in lagu dhajiyo bartaada dhexdeeda inay sidaas kula dhaqmeen. Si fiican ugama tarjumeyso dhammaantood.
Oktoobar 29, 2008 at 5:43 PM
Waxaan u maleynayaa inay taasi run tahay ilaa xad, Colin. Xaqiiqdii ma doonayo in dadka ka baqayaan inay ganacsi ila yeeshaan haddii ay dhacdo wax xun oo laga yaabo inaan wax ka qoro. Sida aad kor ku aragtay, weligay runti ma xusin cidda ay tahay weligayna taas ma samayn doono.
Qaar ka mid ah asxaabteyda ugu dhow waxay ka shaqeeyaan meheradaha weligeyna iskuma dayi doono si xun inaan waxyeello u geysto ganacsigooda - laakiin waxaan sii wadi doonaa inaan daacad ahaado markii la i weydiiyo.
Oktoobar 30, 2008 at 12:18 AM
Doug, aad baan uga xumahay inaan maqlo inay taasi dhacday. Runtii waan ku qanacsanahay fikirkaaga. Wixii ay u qalanto - faallooyinkaagu waa muhiim waana la qadarinayaa.
Feb 15, 2009 markay ahayd 4:12 PM
Sidoo kale waa run marka qof uu weydiiyo su'aal kasta, tusaale ahaan "waa maxay farqiga u dhexeeya Indy &. . . . ”Su’aal dhab ah oo dhawaan la i weydiiyay. Waan iska ilaaliyay jawaabta maxaa yeelay waan ogaa inay caro ku noqon karto weyddiiyaha. Si kastaba ha noqotee, markii la i waydiiyey mar 2aad, waan ka jawaabey & hubaal waa igu filan. . . weydiiyaha wuxuu u arkaayey "mid gef" ah. In kasta oo jawaabta ay xaqiiqo ahaan jirtay.
Haddii aynaan rabin inaan maqalno jawaabta - su'aal kasta - markaa ha weydiin meesha 1-aad.